बाँदरको आतंकले किसान हैरान ! - Seto Khabar बाँदरको आतंकले किसान हैरान ! - Seto Khabar
बाँदरको आतंकले किसान हैरान !
पुस २८। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२, अर्चलबोटका किसानलाई बाँदरले हैरानी बनाएको छ । बाँदरले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली, तरकारी सखाप पार्न थालेपछि किसान हैरान भएका हुन् ।